दुधबाट लाभ लिन सही समयमा पिउनु पर्छ, कुन हो त सही समय ? - Samaya Sandarva
दुधबाट लाभ लिन सही समयमा पिउनु पर्छ, कुन हो त सही समय ?
मंगलवार, बैशाख १०, २०७६ १७:०८ - समय सन्दर्भ
थुप्रै फाइदाजनक तत्वले भरीपूर्ण दुध हाम्रो शरीरको लागी सबै भन्दा राम्रो पोषक पेय मानिन्छ। दुधमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिनका साथसाथै फ्याट, कार्बोहाइड्रेड, कैयौ भिटामिन तथा क्याल्सियम, फस्फोरस, सोडियम, पोटासियम जस्ता मिनरल पनि पाइन्छन। जुन स्वास्थको लागी अत्यन्तै फाइदाजनक छन।
प्राय: हामी बच्चा तथा आफु स्वंय नै दुध पिउनमा जोड दिने गर्दछौ। हुर्की रहेका बाल बच्चालाई दुध अत्यन्तै आवश्यक छ पनि। तर अधिकांशलाई दुध पिउने उपयुक्त समयको परख भने छैन। कोही ब्रेकफास्टमा पिउछन भने, कोही सुत्ने बेला पिउने गर्दछन। आयुर्वेदले पनि राती नै दुध पिउनमा जोड दिन्छ। आउनुहोस जानौं आखिर कुन हो त दुध पिउने उपयुक्त समय-
सामान्यतया रातको समय दुध पिउनुका धेरै नै फाइदा छ्न। राती दुध पिउनु अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ। यसले दिन भरको थकान मेटाउनुका साथै मिठो निद्रा पनि पर्दछ। दुधमा पाइने ट्रीप्टोफन नामक यमिनो एसिडले निद्राको हर्मोन स्तर बढ्ने गर्दछ।
बिहान दुधको सेवन गर्नु पनि लाभदायक नै मानिन्छ। यसले तपाइलाई दिनभर उर्जावान बनाइ राख्न मद्दत गर्दछ।
यो समय बुजुर्गका लागी दुध सेवन गर्न अत्यन्तै उपयुक्त मानिन्छ।
साँझको समयमा दुध सेवन गर्नु आँखाको लागी फाइदा जनक मानिन्छ।